Maleeshiya lagu qiyaasay 2000 oo laga soo ururiyay Puntland oo ku soo fool leh Muqdisho, Ballidoogle iyo Kismaayo soona dhaafay Hiiraan. Ruunkinet 28/02/07
Maleeshiya tiradoodu lagu qiyaasay 2000 oo ruux lagana soo ururiyay degaannada Puntland ayaa ku soo fool leh magaalada Muqdisho iyo goobo kale oo ka tirsan koofurta Soomaaliya.
Qaar ka tirsan maleeshiyadan ayaa lagu arkay ayagoo ka soo gudbaya gobolka Hiiraan kuna soo jeeda xerada Ballidoogle ee degamada Wanleweyn sida ay ku warameen qaar ka tirsan maleeshiyadaasi.
Maleeshiyadan oo aan soo marin Qeybta Galguduud uu ka mara wadada isku xirtay Muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa lagu arkayay odayaal waayeella ah oo sita tuuto cusub iyo go'a ay xirtaan dadka reer miyig ah.
Odayaashan ayaa waxaa ka muuqday qaarkood in aysan weligood arag magaalada Muqdisho iyo magaalo weyn oo ay deggan yihiin dad kala beela ah ayagoo dadka weydinayay imisa maalmood ayay u soconayaan Kismaayo iyo Muqdisho.
Maleeshiyadan oo la sheegay in ay ka mid noqonayaan ciiidamada madaxweyne Yuusuf ku tilmaamay ciiidamada qaranka oo wax ka qabannaya ammaan darrida ka jirta magaalada Muqdisho iyo Kismaayo ayaa la sheegay in loogu tala galay in muddo 3 billood ah ay ku soo afjarayaan xaaladda ka jirta Xamar sida uu sheegay madaxeyne Yuusuf iyo in ay degaan Kismaayo.
Maleeshiyada horay looga soo ururiyay Puntland ayaa lagu qiyaasay 5 kun in kastoo aan la xaqiijin tirada dhabta ah ayagoo inta badan la jooga ciidamada Itoobiya.
Cabdullahii Xuiseen, Ruunkinet, London